August 28, 2019 - ThutaStar
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကော်နီ ရဲ့ “ဆေး” သီချင်းကို ပြန်ဆိုထားတဲ့ ကောင်မလေး
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကော်နီ ရဲ့ “ဆေး” သီချင်းကို ပြန်ဆိုထားတဲ့ ကောင်မလေး ဆေး သီချင်းကို ရေးတဲ့ တေးရေးဆရာကတော့ ဝေကြီးဖြစ်ပီး DREAM LOVER MUSIC BAND က တီးခေတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ မေဘရဏီ က ရိုက်ကူးပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးဟာဆိုရင်တော့ ပရိတ်သတ်တွေ […]
သင်ဇာဝင့်ကျော်ကို ချစ်လွန်းလို့ လက်ဖျံမှာ သေရာပါအမှတ်အသား ရေးထိုးခဲ့တဲ့အမျိုးသား
ညှို့အားပြင်းလွန်းတဲ့ အဖုအထစ်ကောက်ကြောင်းအလှတို့နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ သူမရဲ့ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ယုံကြည်မှုရှိစွာ ချပြတတ်သူတစ်ဦးမို့ ပရိသတ်တွေက အမြဲစောင့်ကြည့်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို သဲသဲလှုပ်ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သင်ဇာကတော့ လတ်တလောမှာလည်း သူမကိုချစ်လွန်းလို့ တော်ရုံလူမလုပ်နိုင်တာတွေကို စွန့်စားပြီး လုပ်ပြလိုက်တဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးအကြောင်း လူမှုကွန်ယက်မှာ […]
၁၈ချက်​ချုပ်​ရတဲ့အထိ မုဒိန်းကျင့်​ခံရတဲ့ (၇) နှစ် ​သမီး​လေး ….
နေပြည်​​တော်​ ငလိုက်​​ချောင်းန​ဘေးမှာ ၁၈ချက်​ချုပ်​ရတဲ့အထိ မုဒိန်းကျင့်​ခံရတဲ့ ၇နှစ်​သမီး​လေး ဆင်းရဲလွန်းသဖြင့်​ ဆရာမများပင်​ သတင်း​မေး မလာ​ကြောင်းသိရ… သမီးငယ်​​လေး​နေအိမ်​ အိမ်​တွင်းအ​နေအထား သမီးငယ်​​လေးရဲ့ ဒဏ်​ရာ နေပြည်တော် မှာ ဖြစ်တဲ့ နောက်ထပ် V လေး ခုနစ်နှစ် သမီးလေး( ပထမတန်းကလေး အသက် ၆ နှစ်ကျော်ကျော်သမီးလေး […]
(၅) ကြိမ်မြောက် ဗစ်တိုရီးယားလေး ရုံးချိန်းတွင် CCTV ဟာ့ဒစ်​ သက်​​သေ​တောင်းတာကို ကွန်​ပျူတာ စစ်​စတန်​ပုံးကြီး မယူလာဟုသိရ
ဒီနေ့ သြဂုတ်လ (၂၈) ရက် နေ့မှာ ဗစ်တိုရီးယားလေးအမှု ငါးကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်း စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဗစ်တိုးရီးယား​လေး ​သက်​ငယ်​မုဒိမ်းမှုနဲ့ပတ်​သက်​ပြီး အမှန်​တရားကိုချစ်​မြတ်​နိုးတဲ့ ပြည်​သူ​တွေဟာ သမီး​လေး ဗစ်​တိုးရီးယားအပါအဝင် သမီး​လေးရဲ့ ​မိသားစုဝင်​​တွေနဲ့အတူ တစ်​သားတည်းရှိ​နေခဲ့တာဖြစ်​ပြီး အမှန်​တရားဘက်​က မားမားမတ်​မတ်​ ရပ်​တည်​​နေခဲ့ကြတာ အားလုံးအသိပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ သမီး​လေး ဗစ်​တိုးရီယားရဲ့အမှုကိစ္စဟာ […]
ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ (၁၂)နှစ်ကလေးမကို လိင်အမြတ်ထုတ်ခဲ့သူ၊ ထောင်နန်းစံရပြီ
တရုတ်နိုင်ငံက ရှန်ဟိုင်းက အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားရင်း ဟောင်ကောင်က အမျိးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ ရင်းနီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးက သူမဟာ အသက်(၂၂)နှစ်ဖြစ်ကြောင်း လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်၊ အမျိုးသားကလည်း ဒီထက်ပိုပြီး ရင်းနီးလာတော့ ချစ်ရေးဆိုခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားရဲ့အသက်မှာ (၂၈)နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ Lu Wei လို့ အမည်ရပါတယ်။ သူဟာ ဟောင်ကောင်သူနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ပြီးနောက်၊ သူမကိုတွေ့ဖို့ […]
လာမယ့် စက်တင်ဘာလအတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မုန်တိုင်း ၂ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မိုးလေဝသဌာနရဲ့ စက်တင်ဘာလ လပတ်မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်ရာမှာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ၃ ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ ၂ ကြိမ်မှာ ပိုမို အားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ‌ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် […]
လမ်းခွဲသွားတဲ့ချစ်သူ နေခြည်ဦးကို သူ့ဆီပြန်လာဖို့ တောင်းပန်လိုက်တဲ့ အောင်နွေဦး
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်စီးပေးတတ်ပြီး ဂရုစိုက်ကြလွန်းတဲ့ နေခြည်ဦးနဲ့ အောင်နွေဦးတို့ အတွဲလေးက ပရိသတ်တိုင်း အားကျခဲ့ရတဲ့ အတွဲလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ(၁၃) ရက်နေ့မှာတော့ နေုခြည်ဦးက အောင်နွေဦးနဲ့ နောက်တတွေမရှိပဲ လမ်းခွဲလိုက်ပြီးလို့ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦးတို့ အတွဲလေး […]
ပဉ္စမမြောက် ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှု ရုံးချိန်း အခြေအနေများ….
ဒီနေ့ သြဂုတ်လ ၂၈ရက် ၂၀၁၉ခုနှစ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့မေလက နေပြည်တော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အသက် ၃နှစ်အရွယ် Wisdom Hillမူကြိုကျောင်းမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားဆိုတဲ့ကလေးငယ်လေး လိင်မှုစော်ကားခံရတဲ့အမှုကို စစ်ဆေးတဲ့ ပဉ္စမမြောက်ရုံးချိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုကို နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးနေဆဲပါ။ ဒီနေ့ပဉ္စမမြောက်ရုံးချိန်းမှာ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အဘွားဖြစ်သူကို သံသယတရားခံကိုအောင်ကြီးရဲ့ရှေ့နေ့နဲ့ ဥပဒေအရာရှိတို့က အပြန်အလှန်စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနရဲ့ သတင်းထောက်ပြောပြတဲ့ […]
တကယ်ရှိတယ် တကယ်ဖြစ်သွားပါပြီ မိသားစုပြိုကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း (ဖြစ်ရပ်မှန်)